Hamro Online NewsNepal's Leading News Portal | ९ बर्षिया अर्बिताले बाबालाई लेखिन यस्तो पत्र - Hamro Online News
९ बर्षिया अर्बिताले बाबालाई लेखिन यस्तो पत्र
बिहिबार, चैत्र २८, २०७५ | onlinenews
मेरो प्यारो बाबा म अर्बिता श्रेष्ठ हजुरको छोरी
हजुरले जे गर्नु पर्ने हो गरिसक्नु भयो । अब मेरो पालो हो गर्ने । मैले exam भर read गरेको होनि !
अब त यो छुट्टीमा मलाई खेल्न दिनु । मैले जे गरे हजुरहरुको life कै लागि गरे मैले त । ममिले अर्काे बच्चा जन्माउनु भयो र म accident मा मरे भने त के हजुरहरुले पनि अर्को छोरीलाई यसरी नै कुटेर थर्काएर पाल्नु हुन्छ ? मलाई जवाफ दिनु ।
अर्बिताले किन लेखिन त बाबालाई यस्तो पत्र ?
भनिन्छ साना नानीहरू भविष्यका कर्णधार हुन् । राम्रो वातावरण दिनु अभिभावकको कर्तव्य हो । तर। त्यही अभिभावकत्व निर्वाह गर्दा कहिलेकही बाल मनोबिज्ञानमा नराम्रो असर पर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी हुने रैछ । केही दिन अघि यस्तै भयो सुन्दा अपत्यारिलो तर वास्तविक ।
काभ्रे जिल्ला पनौती घर भई हाल भक्तपुर मनोहरा फाटमा ६ महिनादेखि होटल ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका खेम श्रेष्ठको हो ।
उनकी छोरी ८ बर्ष पूरा गरि ९ बर्षमा लागेकोे १ दिन मात्र भएको थियो । उनले आफ्नो फाइनल परीक्षा सकेर अलि स्वतन्त्र भएको महसुस गर्दै साथीहरुसँग खेल्ने समय सदुपयोग गर्दै थिइन । एक दिन खेमले छोरी अर्बितालाई केही हप्काएर पढ्न र गृहकार्य गर्न लगाउने प्रयास गरे तर उनले यो सोचेनन कि अर्बिताको मनमा र मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्छ भन्ने ।
बिचरा त्यो कोमल हृदयमा परेको पीडा उनले मार्मिक शब्दमा लेख्दै आफ्नो बाबालाई दिने निर्णय गरिन । बाबा होटेल व्यावसायि भएकाले सधै ग्याँस चुलो नजिक भइरहँने हुँदा चुलोमाथि चिठ्ठी राख्दै भनिन बाबा हजुरको चिठी छ पढ्नु होला भनेर भित्र गइन ।
छोरीको चिठ्ठि पढ्दै आफू धेरै भावुक भएको खेम बताउछन् । यति सानोमा यस्तो कुरा कसरी आयो अर्बिताको आमा पनि अचम्मित भइन ।